सुर्तीजन्य पदार्थमा कर छली गर्ने विभिन्न कम्पनीका सञ्चालकविरुद्ध राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा चलाएको छ । दोलखा घर भई काठमाडौँ महानगरपालिका–३२ बस्ने ग्रिन टोवागो कम्पनी प्रालिका सञ्चालक प्रभुराम श्रेष्ठसमेतले रु १० करोड १५ लाख बिगो बराबरको राजस्व छली गरेको आरोपमा विभागले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको आज एक सूचना...
- नारायण ढुङ्गाना काठमाण्डौ । बजारमा जैविक खाद्य वस्तुको नाममा तरकारीदेखि विभिन्न खाद्यान्न निर्वाधरूपमा बिक्री वितरण भइरहेको छ । कतिपयले जैविक फार्मको नाममा कम्पनी नै खोलेर ती चिजवस्तु निर्वाधरूपमा बिक्री वितरण गरिरहेका छन् । सरकारले गरेको परीक्षणमा बिक्री वितरण भएको तरकारीलगायत मालवस्तुमा विषादीको मात्रा बढी भएको पुष्टि भएर...
- सञ्चिता घिमिरे काठमाण्डौ । काभ्रे जिल्लाको पनौतीस्थित ‘मिनरल वाटर’ आयोजनाबाट उत्पादित पानीको बजारमा माग धेरै भए पनि त्यसअनुसार उत्पादन हुन सकेको छैन । जग्गाको अभावकै कारण आयोजनाले क्षमताभन्दा ज्यादै कम परिणाममा पानी बजारमा आपूर्ति हुने गरेको छ । सरकारीस्तरबाट पानी बिक्री–वितरण गर्ने पहिलो आयोजना भए पनि यसलाई विस्तार गर्न...
लहान । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र लहानले रु. २९ करोडभन्दा बढी बक्यौता देखिएपछि लामो समयदेखि महसुल नबुझाउने ग्राहकको लाइन काट्ने तयारी गरेको छ । लामो समयदेखि ग्राहकले विद्युत् महसुल नतिर्दा प्राधिकरणले रु. २९ करोड ३७ लाख ३७ हजार २०७ बक्यौता असुल्न बाँकी रहेको विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र लहानका प्रमुख इन्जिनीयर...
– शर्मिला पाठक काठमाण्डौ । यस वर्षको तिहारमा गत वर्षभन्दा रु आठ लाख बढी विभिन्न फूलका माला खपत हुने भएको छ । गत वर्ष तिहारमा १७ लाख माला खपत भएको थियो । यस वर्ष भने बजारमा २५ लाख मालाको माग रहेको बताइएको छ । बजारमा फूलको माग बढे पनि स्वदेशमै उत्पादन राम्रो रहेकाले आयात गर्ने फूलमा भने कमी आउने भएको छ । मुख्यगरी तिहारमा प्रयोग हुने...
मूल्य तोक्न नसक्दा खाद्य व्यवस्थाको खसी–बोका बिक्री हुन सकेन
काठमाण्डौ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले दशैँका लागि ल्याएको खसी, बोका तथा च्याङ्ग्राको मूल्य कायम हुन नसक्दा बिक्री वितरण हुन सकेको छैन । विभिन्न जिल्लाबाट ल्याइएका ती खसी बोकाको स्थानीय बजारमा मूल्य महङ्गो भएको र उपभोक्तालाई केही सहुलियतमा उपलब्ध गराउने विषयमा प्रक्रिया पुर्याउन छलफल भइरहेकाले मूल्य तोक्न ढिला भएको...
काठमाण्डौ । दशैँ सुरु भएसँगै काठमाण्डौ उपत्यकामा खसीको मासुको मूल्य प्रतिकिलो रु. ३०० सम्मले वृद्धि भएको छ। सरकारले भारतलगायत अन्य मुलुकबाट आयात गरिने पशुपक्षीको अनिवार्य स्वास्थ्य जाँच गरिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ लागु गरेकाले आयात घट्न गएकाले दशैँका बेला खसीको मासुको मूल्य अझ बढ्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्। केही ...
काठमाण्डौ । नेपालीको घरआँगनमा दसैँको चटरो परिसकेको छ । दसैँमा आवश्यक सरसामग्री किन्ने भीडा बजारमा बढिरहेको छ । दसैँको रमझम सुरु भए पनि यसपालि तरकारीजन्य वस्तुको भाउ अकासिँदा आमउपभोक्ता रुनु न हास्नुको स्थितिमा पुगेका छन् । विशेषगरी नेपालीको भान्सामा अत्यावश्यक सुकेको प्याज दोब्बरले बढ्दा उपभोक्ता मारमा परेका छन् । गत भदौ १३ गते...
– धर्म मलासी काठमाण्डौ । नेपालीको महान् चाड बडादसैँको आगमनसँगै उपत्यकाका बजारहरुमा किनमेल गर्नेको घुइँचो बढ्न थालेको छ । दसैँलाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्नदेखि लिएर भाँडाकुँडा, लत्ताकपडा आदि सामग्री किन्नेहरुले अहिले बजार छपक्कै छोपेको छ । यसैगरी व्यापारीहरुले पनि चाडपर्वको मौकामा ग्राहक तान्न विभिन्न किसिमका अफरदेखि मूल्यमा भारी...
- धर्म मलासी काठमाण्डौ । दसैँको मुखमा हरियो तरकारीको मूल्य दोब्बर बढीले बढेपछि उपभोक्ता मारमा परेका छन् । दसैँ सुरु हुन अब एक सातामात्र बाँकी छ । तरकारी बजारमा भने एक साताको अन्तरालमै दोब्बर बढीले वृद्धि भएपछि उपभोक्ताको भान्सा महँगिएको हो । कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार विकास समितिको मूल्यसूचीअनुसार हरियो तरकारीको खुद्रा मूल्य...
काठमाण्डौ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले सिमेन्टको गुणस्तर सूचकांक मा कुनै हेरफेर नभएको बताएको छ । विभागले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गरी केही समयअघि जारी गरेको सिमेन्टको नयाँ मापदण्डमा कुनै हेरफेर नभएको बताएको हो । छिमेकी राष्ट्र भारतमा समेत सिमेन्टको गुणस्तर आइआरको मान दुई प्रतिशत रहेको अवस्थामा नेपालमा गुणस्तर निर्धारण गर्दा...